Yakha iBlog Traffic nge-eCourse kunye neDilesi yesibini | Martech Zone
Yakha iBlog Traffic nge-eCourse kunye neDilesi yesibini
NgoLwesibini, Septemba 15, 2009 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 9, 2022 Lorraine Ibhola
Kudala ndikhahlela malunga nombono wokubonelela nge-eCourse yasimahla iinyanga ezimbalwa. Ukukhuthazwa kombono kwaba sisiphumo sokuthatha inxaxheba kwimvelaphi yeProBlogger- Uyakha njani iBhlog elungileyo ngeentsuku ezingama-31. (Yayiyi-eCourse yasimahla, ngoku ikho a book)
Umxholo wokuqala wawupholile: Bhalisa, fumana i-imeyile, unxibelelane neposti yebhlog, uphawule, ujoyine iqonga, funda amanye amagqabantshintshi, fumana isabelo, wabelane ngezinto ozifundayo, kwaye umjikelo uqala kwakhona.
Ndacinga ukuba yindlela elungileyo yokubandakanya abafundi, ukubonisa endikwaziyo, ukuthatha ukuthengisa iincwadi ezimbalwa, kwaye mhlawumbi nomthengi apha endleleni. Ngokusungulwa kwewebhusayithi yethu entsha emva kwethu, bendikulungele ukuqalisa.
Umntu onomdla Qha ga mshelwano Umsebenzisi, ndiye ndadana ukufumanisa ukuba ndingadala ukuya kuthi ga kwi-15 abaphenduli be-auto, kodwa ndibe ne-5 esebenzayo nangaliphi na ixesha. (Oko akusebenzi kakuhle kumntu ocwangcisa i Iiveki ezilishumi zeevekie)
Kwaye ke ukuzingela kwaqala ngolunye uhlobo, ubutyebi obunokufikeleleka. Ndonwabile ukufumana, ukuphuhliswa kwendawo Idilesi yesibini ngoku ibonelela ngomsebenzi wephulo. Okwangoku kwi-Beta, bekukho ii-quirks ezimbalwa, kodwa umphuhlisi, uNick Carter akalali. Izicelo zam, imibuzo, kunye nezikhalazo ngamanye amaxesha ziyaphendulwa, kwaye zilungiswe, rhoqo ngaphambi kokuba ndingene kwakhona.
Yintoni idilesi ezimbini? Impendulo emfutshane: Isixhobo esilula seCRM, somntu ongonelanga ngokwaneleyo kwiGoldmine, okanye iSalesforce. Ngoncedo lwesixhobo somkhankaso, ndineeseti ze-imeyile ezili-10, ezilungiselelwe kwangaphambili ukuba zisiwe kube kanye ngeveki. I-imeyile nganye iqhagamshelwe kwiposti yebhlog.
Njengabantu abatsha abakhuphelayo isicwangciso seshishini bayongezwa kwiqela elitsha, kwaye baqala ukufumana ulandelelwano. Ndinganabantu abaninzi okanye amaqela akhulayo ngale nkqubo, onke ngokwamanqanaba ahlukeneyo.
Isebenza njani ukuza kuthi ga ngoku? Ukusukela oko ndathumela izimemo zokuqala kwiithenda ezidlulileyo, ndinabantu abamalunga nama-60 ababhalise kwelinye lamaqela amane. Ndiza kubona ishishini elongezelelweyo? Esi sisicwangciso, kodwa atleast okwangoku, ndinabantu abangama-60 abamenyiweyo ukuba babuyele kwiwebhusayithi yam ngesiqulatho esitsha veki nganye, kwaye malunga ne-1/2 yabo benza ibuyelo ukuza kuthi ga ngoku.
Zininzi izicelo zolu hlobo lomkhankaso, kwaye ukuba singazenza zonke iibugs zisebenze, siza kuzama nakubathengi abambalwa.
Ukuba unomdla wokwenziwa kwiphakheji yokuLawulwa koBudlelwane baThengi (i-CRM), i-AddressTwo yenze umsebenzi omkhulu wokubhala yintoni iCRM kule vidiyo:
tags: dilesi ezimbinikubangeCRMulawulo oludibene nabathengiecourseisifundoizifundo zekhompyutha
Yiba Nobuchule obaneleyo ukuze ufumane iimpendulo
Sep 15, 2009 ngo-8:44 PM
Okunjani kona ukufunyanwa… kwaye nalapha eSilicorn Valley ngokunjalo!